Maraykanka oo sheegay inuu dagaalyahano badan ka dilay Alshabaab | Goojacade
Home War Maraykanka oo sheegay inuu dagaalyahano badan ka dilay Alshabaab
Maraykanka oo sheegay inuu dagaalyahano badan ka dilay Alshabaab
Dowladda Mareykanka ayaa warbixin kasoo saartay duqeyn ay la eegteen saldhig Al-Shabaab ku leeyihiin deegaan ku dhow magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Warbixinta taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ay soo saareen ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday deegaanka Shabeeleey in lagu dilay ciidamadii ugu badnaa Al shabaab looga dilo gobolka Hiiraan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 30 askari ay kaga dhinteen Al shabaab duqeyn ka dhacday deegaanka SHabeelleey ee gobolka Hiiraan, waxaana la sheegay inay dhamaantood tababar qaadanayeen.
Duqeymaha lala eeganayo saldhigyada Al shabaab ee Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay, waxaana qoraalka Mareykanka lagu sheegay inay soo kordhin doonaan weerarada ay la eeganayaan Al shabaab.
Dhamaadkii sanadkii hore maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee jooga Africa inay weeraro ka fulin doonaan deegaanada Al shabaab kaga sugan yihiin Hirshabeelle.
Previous articleDukaamo ay Soomaalida Koonfur Afrika leedahay oo la boobay
Next articleCiidanka Kenya ee AMISOM oo lagu Weeraray Deegaanno ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose